Zonke ezi ziindaba ezivela kuGoogle ze2019 | Iindaba zeGajethi
Zonke ezi ziindaba ezivela kuGoogle ze2019
Google ibibanjwe izolo, inkomfa yonyaka apho iveza zonke iindaba ezizakufika unyaka wonke ngohlobo lwezixhobo, imisebenzi, iinkqubo zokusebenza, izicelo ezintsha ... Sifikelele kwinqanaba apho izinto ezintsha ziye zaba yinto exabisekileyo kwaye uGoogle, njengo-Apple ngaphambili, akasibonisanga ngawo nawuphi na umsebenzi oya kuvula iingqondo zethu.
Ukongeza ekunikezeleni ngokusemthethweni i-Android Q, nangona ingakhange ityhile igama elipheleleyo lenguqulelo elandelayo ye-Android, abafana bakwaSundai Photosi nabo babonisa ii-terminals ezimbini ezintsha: I-Google Pixel 3a kunye ne-3a XL, iiterminal ezimbini ezinoyilo olusuka kwiminyaka emithathu eyadlulayo, apho izakhelo eziphezulu, ezisezantsi kunye necala zikhanya ngokugqithileyo. Ukongeza, ixabiso layo alihambi kakhulu.
1 Yintoni entsha kwi-Android Q
1.1 Iimpendulo ezizenzekelayo kwizaziso
1.2 Imo emnyama
1.3 Iimpawu ezintsha zokunxibelelana nesixhobo
1.4 Ukuhambelana okusongelayo kwe-smartphone
1.5 Umncedisi kaGoogle ufumaneka kwisiphelo sendlela
1.6 Iifowuni ezihambelana ne-beta ye-Android Q
2 I-Google Pixel 3a kunye nePixel 3a XL
3 I-duplex, inyathelo elinye ukuya phambili
4 INest Hub Max
Yintoni entsha kwi-Android Q
Nangona inguqulelo elandelayo ye-Android, Q, ibikunye nathi iinyanga ezimbalwa, kude kube ngoku, isigebenga sokukhangela besingakhange sibhengeze ngokusemthethweni olu hlobo lulandelayo. Kule meko, ezinye ze iindaba eziza kuvela kwisandla senguqulelo elandelayo yenkqubo yokusebenza ye-Android kwii-smartphones ezihambelanayo.
Ngokumiliselwa kwePie ye-Android, ithiyori yayikukuba enkosi kwiProjekthi iTreble, ukwamkelwa kwale nguqulo ye-Android kungakhawuleza kakhulu ngabasebenzisi, kodwa kwiinyanga ezilithoba kamva, I-Android Pie ifumaneka kwi-10% yezixhobo, manani amancinci ethembisayo amabango kaGoogle.
IProble Treble ukubheja kukaGoogle ukukhawulezisa uhlaziyo, kuba inkampani iqinisekisa ukuba inkqubo yokusebenza iyahambelana nazo zonke izinto ze-smartphone, ishiya kuphela abavelisi ukuba bahlengahlengise uluhlu lwabo lolwenziwo.
Iimpendulo ezizenzekelayo kwizaziso
Ngalo lonke usuku sifumana inani elikhulu lezaziso, ezinye zazo ezingenakusinceda kuthi ngexesha elithile. Nge-Android Q, ulawulo lwezaziso, ukuba belusele lulungile ngokwalo, ngoku kulunge ngakumbi, kuba iyakusivumela ukuba sithulise izaziso zezicelo ezithile ngexesha elisekwe ngaphambili.
Ngale ndlela siya kuba nakho ukwenza ukuba ungaphazamisi imowudi, kodwa ukuvumela usetyenziso oluthile lomyalezo, umzekelo, ukusazisa ngemiyalezo emitsha, umsebenzi ilungele ixesha esingenakuthetha ngalo emnxebeni kwaye silindele umyalezo okanye i-imeyile.
Enye yezona zinto zinomdla kwinguqu elandelayo ye-Android, ziya kuba ziimpendulo ezizenzekelayo ezifumaneka kwizaziso. Ngale ndlela, siya kuba nakho ukuphendula ngokukhawuleza ngaphandle kokuvula i-terminal, faka isicelo kwaye ubhale impendulo. Lo msebenzi ufana kakhulu naleyo sele sinayo ngokuthe ngqo ngeGmail.
Abanye abasebenzisi bakholelwa ukuba imowudi emnyama sele ifunyenwe ngokwendalo kwi-Android, kuba abanye abavelisi bayinikezela ngomaleko wabo wokwenza ngokwezifiso, kodwa ayisiyiyo. Ngokumiliselwa kwe-Android Q, uGoogle uya kunika ithuba lokusebenzisa imowudi emnyama kwindawo yethu ehambelanayo, indlela emnyama leyoe iya kuqinisekisa ukuba zonke iinkqubo ezikhoyo zisebenza ngokuzenzekelayo xa yenziwe.
Imowudi emnyama, ukongeza kubuhle obutsha asinike bona, ivumela ukuba sigcine isixa esikhulu sebhetri okoko isiphelo sethu sisebenzisa uhlobo lwe-OLED isikrini, ukusukela obu buchwephesha layita Ii-LEDs kuphela ezibonisa umbala ngaphandle komnyama. Ngale ndlela, ukuba uninzi lojongano, kubandakanya imvelaphi, limnyama, akukho mfuneko yokukhanyisa isikrini sonke njengoko kusenzeka kwizikrini ze-LCD zemveli.
Iimpawu ezintsha zokunxibelelana nesixhobo
Ngokukhutshwa kwePie ye-Android, UGoogle uqalise ukwazisa izijekulo kwiscreen ukuze ukwazi ukuhamba ujikeleza inkqubo yokusebenza, ngenxa yesidingo sabavelisi, kuba uninzi lwabo belukhethile okanye besenza amaqhosha ebesihamba nathi okoko iinguqulelo zokuqala ze-Android zanyamalala. Ngelixa kuyinyani ukuba uninzi lwazo luyafana nolo lwaziswa yi-Apple nge-iPhone X, oyena mthombo wokhuthazo lwe-Apple yayikukuqhekeka kwejele kunye nePalm.
Ukuhambelana okusongelayo kwe-smartphone
Xa i-Samsung yazisa ngeGold Fold, inkampani yaseKorea ibibanga ukuba isebenzisane noGoogle ukuyiguqula I-Android kolu hlobo lwezikrini kunye nezibonelelo abasinika zona ngokubhekisele kwizikrini ze-smartphone. Njengakwinotshi yezinye iitheminali, uGoogle kuye kwafuneka alungelelanise ujongano lwalo kolu hlobo lwesiphelo.
Umncedisi kaGoogle ufumaneka kwisiphelo sendlela
Ngokungafaniyo nezinye iinkqubo ezisebenza ngeselula, ezinje nge-iOS, ukuze ukwazi ukusebenzisa umntu oncedisayo, akukho mfuneko yokuba unxibelelwano lwe-intanethi, ukuze kuthi ukuba imowudi yenqwelomoya ivuliwe okanye sizifumane ngaphandle kokugubungela, siya kuba nakho ukucela uGoogle ukuba asibonise imifanekiso ethile, ukwenza ukuba isebenze okanye ingasebenzi indlela ethile yesiphelo sethu, ukugcina inombolo yefowuni ...
Kwakhona, xa siqala incoko noGoogle, umncedisi uya kulinda imizuzwana embalwa ukujonga ukuba sifuna ukubuza umbuzo omnye okanye nangona sanelisile isidingo sethu okanye umdla wethu okomzuzwana, ukunqanda ukuba kufuneka sibhenele kumncedisi kaninzi xa sifuna ukubuza imibuzo eliqela.
Iifowuni ezihambelana ne-beta ye-Android Q
Kunyaka ophelileyo, inani leetheminali ezihambelana ne-beta yokuqala ye-Android Pie lalilincinci kakhulu, linciphisa kwiimodeli ezisi-7 kuphela. Ngeli xesha, UGoogle ukwazile ukutsala abavelisi abaninzi kule nkqubo ye-betaKe ngoko, inani lee-smartphones ezihambelana ne-beta ye-Android Q, kwaye eya kuthi ke ibe phakathi kweyokuqala ukuhlaziywa kwinguqu elandelayo ye-Android, ingama-21:
I-Google Pixel 3a kunye nePixel 3a XL
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, uGoogle uqobo waqonda ukuba ukuthengiswa kwePixel 3 kunye ne-3 XL kwakungalindelwanga, nangona kunjalo, kubonakala ngathi isigebenga sokukhangela sisabheja ekusunguleni ii-smartphones zaso. Ewe bafuna ukufikelela kubaphulaphuli ababanzi kwaye oku bakubonisile kumsitho i-Pixel 3a kunye ne-3a XL, ii-smartphones ezimbini ezinoyilo olungathandekiyo kodwa Banikezela ngemisebenzi efanayo nePixel 3 kunye ne-3 XL.
Ewe, iimodeli ezintsha azidibanisi i-Visual Core, iprosesa enoxanduva lokuqhubekeka nezinto ezenziwa yinkampani kwaye ifumene uphononongo olulungileyo kumaphephandaba. Ukuba sithathela ingqalelo loo ndawo ukongeza kwixabiso lesiphelo, i-399 kunye ne-479 euro ngokulandelelana, kwaye uyilo lubonakala kum ngathi lincinci okanye akukho nto izakufumana uGoogle ngezi terminals. Yintoni egqithisile, Zenziwe ngeplastiki kwaye aziboneleli ngenkqubo yokutshaja ngaphandle kwamacingo.
Uninzi lwabasebenzisi luxhomekeke kubuhle besiphelo sendlela xa uyithenga, Ukuyeka bucala izibonelelo. Kuphela kwento esiyiqonda kakhulu malunga nesihloko, asijongi kuyilo kuphela, kodwa nakwiimpawu, amandla, iprosesa, ukugcinwa, izinto zokwenza ... Kwimarike, zombini iXiaomi kunye neHuawei okanye iSamsung zisinika iitheminali ezi ifana kakhulu nokusebenza kobuchwephesha kodwa kuyilo olunomtsalane ngakumbi kunePixel 3a kunye ne3a XL.
Ngokucacileyo ukuba umphandle awunanjongo kuwe, kunokwenzeka ukuba bonke abo basinika ngaphakathi ukuba nguwe. I-Google Pixel 3a entsha isinika inkqubo yokutshaja ngokukhawuleza enemizuzu eli-15 kuphela yokutshaja osinika ukuzimela ukuya kuthi ga kwiiyure ezisi-7. Ikhamera iya kusivumela ukuba sithathe zonke iinkcukacha kunye nemibala ebumnyameni ngaphandle kokusebenzisa ifleshi, kwaye enkosi kwiifoto zikaGoogle, sinokuwugcina wonke umxholo ukhululekile efini.
Njengesiqhelo, uGoogle isinika ukhuseleko kunye nohlaziyo lwenkqubo yokusebenza iminyaka emi-3I-terminal yethu ihlala ikhuselwe kwaye ukusebenza kwayo kufanelekile. Nangona namhlanje kubonakala kuyinto encinci, ibandakanya i-headphone port. Apha ngezantsi sikubonisa inkcazo epheleleyo yeGoogle Pixel 3a kunye neGoogle Pixel 3a XL.
Umahluko ophambili kunye ophambili ufumaneka kwi ubungakanani bescreenKuba iPixel 3a inesikrini esizi-intshi ezi-5,6 ngelixa i-3a XL ifikelela kwi-intshi ezi-6, zombini izikrini zinetekhnoloji ye-OLED. Ngaphandle kokubonisa izakhelo zesisa, isivamvo somnwe seminwe siyafumaneka ngasemva kwesiphelo.
IPHAYELELE YOGOGO 3a
IPHAYIBHILE YOGOGO 3a XL
ISIKHUMBUZO I-5,6-intshi ye-OLED enesisombululo se-FullHD + (i-2.220 x 1.080 pixels) kunye ne-18,5: 9 umlinganiso wesikrini I-6-intshi ye-OLED enesisombululo se-FullHD + (i-2.160 x 1.080 pixels) kunye ne-18: 9 umlinganiso wesikrini
I-duplex, inyathelo elinye ukuya phambili
Itekhnoloji kaDuplex kaGoogle yasikhombisa kunyaka ophelileyo ukuba kunokwenzeka njani Bhukisha itafile kwindawo yokutyela ngomnxeba usebenzisa uMncedisi kaGoogle. Abafana bakwaSundai Photosi bafuna ukuthatha le teknoloji inyathelo eliya phambili kwaye bayiphumeze kwiwebhu. Ngale ndlela, umncedisi uya kuba nakho ukufaka ulwazi lwethu, umzekelo, ukugcina imoto, ngokujonga kwiintsuku zohambo esibe sizicwangcisile ngaphandle kokwenza nantoni na kwinkqubo.
INest Hub Max
UGoogle ukwazile ukungena kumakhaya amaninzi ngeKhaya likaGoogle, isithethi esiqaqambileyo senkampani, kodwa iswele isixhobo esine-screen ejolise ikakhulu ekuphatheni ikhaya elilumkileyo, njengeNest Hub Max, isixhobo esinokuthi senze iminxeba ngevidiyo ngokusebenzisa iGoogle Duo enkosi kwikhamera edityanisiweyo ebanzi, ukujonga i-intanethi, ukubukela umabonwakude ... iNest Hub Max, kukuzibophelela kwakho kweli candelo, apho IAmazon sele inikezela ngezixhobo ezininzi, njengoko kunjalo nakuFacebook ngePortal.
Olu hlobo lwesixhobo esinokulubeka naphina endlwini, lwenzelwe ukuba lusetyenziswe ekhitshini. Idibanisa isikrini se-intshi enye kwaye isinika ukufikelela kwihlabathi liphela likaGoogle ngokusebenzisa ipaneli yokuchukumisa. UGoogle uthathe ithuba lobuchwephesha beNest, inkampani eyenza iikhamera zokhuselo kwaye ithenge iminyaka embalwa edlulileyo, kwesi sixhobo.
I-Nest Hub Max iya kufumaneka ehlotyeni nge-229 yeedola e-United States, nangona kunjalo, inkampani ibanga ukuba kwiinyanga ezizayo, izakufumaneka nakwamanye amazwe ali-12. phakathi kwazo iSpeyin, nangona singazi ukuba izakuba leliphi ixabiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Zonke ezi ziindaba ezivela kuGoogle ze2019
Sikunika IINYANGA EZINTATHU zeAmazon Music Unlimited [Siphe]
Uhlalutyo lwebhokisi ye-Urban ye-7 isithethi esivela kwi-Energy Sistem